आफूलाई पर्दा सडकमा आएर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने नेताहरू निर्मलाजस्ता कलिला नानीहरू बलात्कृत भएर मारिँदा कहाँ थियौ ?
पुस २४, २०७७ रामेश्वरी पन्त
पटकपटक सरकार फेरिइरहँदा र देशको राजनीति अस्थिर भइदिँदा विकासको गति ठप्प भएको महसुस गरिरहेका नागरिकले राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकासलाई गति दिन भन्दै कम्युनिस्ट सरकारलाई बहुमत दिएर सिंहदरबार पठाए । तर, त्यो कम्युनिस्ट सत्ताका नायक (?) खड्गप्रसाद ओलीबाट एकाएक आम नागरिकको मत र विश्वासमाथि तातोपानी खन्याउने काम भएपछि तातेको राजनीतिक माहोलबीच ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै केही राजनीतिक खेलाडीहरू लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्र चालु कुर्सीदौडबाट उछिट्टिएर माइतीघर मण्डलाको चिसो सडकमा पछारिन आइपुगेका छन् । प्रधानमन्त्री र ‘ल्याप्चे’ राष्ट्रपतिका लात्तीको संयुक्त प्रहारबाट उछिट्टिएका यी खेलाडीहरू आजसम्म आम नागरिकको नजरमा गुमनाम थिए भन्ने कुरा त यिनकै छातीमा टाँसिएको प्लेकार्डमा लिखित ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने शब्दावलीले नै प्रस्ट पार्छ ।
आज यिनीहरू जसरी सत्ता नपाउँदा अरण्यरोदन गर्दै माइतीघरको चिसो सडकमा पलेंटी कस्न आइपुगेका छन् नि, ठीक त्यसरी नै केही दिनदेखि आफ्नो श्रम र पसिनाको मूल्य नपाउँदा तराईका उखु किसानहरू यही माइतीघरको चिसो सडकमा बसी सिंहदरबारतिर फर्केर यिनीहरूसँग हारगुहार गरिरहेका थिए; चिनी मिल मालिकहरूले खाइदिएको आफ्नो पसिनाको मूल्य फिर्ता गराइदेऊ भन्दै आँसुका धारा बगाइरहेका थिए । तर, यी खेलाडीहरूले न त तिनको आवाज सुने, न तिनका आँखाबाट बगिरहेका आँसुका धारा नै देखे । सुन्ने–देख्नेको त कुरै छोडौं, सुन्ने–देख्ने प्रयाससम्म गरेको पाइएन । सायद आज तिनै उखु किसानहरू यिनका चर्तिकला हेरिरहेका होलान् । सिंहदरबार छिरेपछि आम नागरिकको दैलो बिर्सेका यिनीहरूले आज तिनैसँग आफ्नो खोसिएको सत्ता फिर्ता पाउन गरेको रुवाबासी देखेर तिनका मनमा कस्ता प्रश्नहरू उब्जिरहेका होलान् ?
यति बेला एक नागरिकका रूपमा म आफैंसँग प्रश्न गरिरहिछु— यो देश आखिर हो चाहिँ कसको ? मजस्ता आम नागरिकको कि केही मुट्ठीभर नेताहरूको ? यही प्रश्नको भुमरीमा फनफनी घुम्दै गर्दा आज सर्वसाधारणका रूपमा आफूले गरेको राजनीतिक संघर्षको यात्रा झलझली याद आइरहेको छ । २००७ सालमा मेरा हजुरबुबा र बुबा पुस्ताले देशलाई राणाको कब्जाबाट मुक्त गराई आफ्नो बनाउन भन्दै संघर्ष गरे । कैयौंले ज्यानको बलिदान दिए । राणाहरू पराजित भए ।
त्यति बेला आम नेपालीले सोचे— अब देश हाम्रो भयो, शासन हाम्रो भयो । तर होइन रहेछ । राणापछि देश राजाको भयो, शासन राजाको भयो, हाम्रा हजुरबुबा र बुबाहरू रैती नै रहे । देशमा पञ्चायतको हालीमुहाली रह्यो । बुबाहरू फेरि पञ्चायत फाल्न लागिपरे । वर्षौं पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गरे । मलाई याद छ, राम्रोसँग नटेकिने खुट्टा घिसार्दै म पनि बुबाहरूको पछिपछि संघर्षको यात्रामा हिँडेकी थिएँ । २०३६ सालको त्यो पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा दिनभर बुबा र दाइहरूको पछिपछि पञ्चायतविरोधी नारा भट्याउँदै हिँड्दाको थकाइ आज पनि बिर्सन सकेकी छैन ।
२०३६ सालमा हिँडेका कलिला खुट्टाले पञ्चायतको जग मात्रै हल्लाउन सके । फेरि २०४६ सालमा बलियो गरी हिँड्यौं, बलियो गरी लड्यौं र नागरिक शासनको जग बसाल्यौं । राजाका मान्छे होइन, नागरिकका मान्छे छानेर शासन गर्न पठायौं । सोच्यौं– अब देश हाम्रो हुन्छ, शासन हाम्रो हुन्छ । तर न देश हाम्रो भयो, न त शासन हाम्रो भयो । हामी अझै पनि रैती नै रह्यौं । हामीले शासन गर्न पठाएका हाम्रा नेताहरूले भन्न थाले, ‘राजाले हामीलाई शासन गर्न दिएनन्, अब राजा नै फाल्नुपर्छ ।’ हामीले पत्यायौं । हामीले तिनलाई साथ दियौं । ‘देश आफ्नो हुन्छ, शासन आफ्नो हुन्छ’ भन्ने आसमा हजारौंको ज्यान गयो, लाखौंको बिचल्ली भयो ।
अन्ततः राजाको शासन गयो । सोच्यौं– अब त पक्कै पनि रैतीबाट स्वतन्त्र नागरिक भयौं, आफ्नो शासन आफैं गर्नेछौं । तर होइन रहेछ । हामी नागरिक भएकै रहेनछौं । हाम्रा प्रतिनिधि शीतलनिवास र सिंहदरबार पसेपछि त उनीहरू नै ‘राजा’ बने । कोही छोटेराजा, कोही बडेराजा । सबैलाई सत्ता चाहियो, सबैलाई कुर्सी चाहियो । सत्ताको माद र उन्मादका बीचमा हामी ओझेलमा पर्‍यौं । हाम्रा सपना, इच्छा र चाहनाहरू सबै ओझेलमा परे ।
रैतीबाट नागरिक हुन हामीले वर्षौं संघर्ष गर्‍यौं तर उनीहरू हामीमाथि नै शासन गर्न वर्षौंदेखि कुर्सीको लडाइँ लडिरहेका छन् । उनीहरूले ‘हामीलाई बहुमत दिएर पठाऊ, हामी तिम्रा लागि काम गर्छौं’ भने । हामीले बहुमत दियौं तर हाम्रो मतलाई केवल आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे । सडकबाट हामीले उठाएर पठाएका नेताहरू आज राजा–महाराजाकै जीवनशैली बाँचिरहेका छन् । राजनीति उनीहरूका लागि कमाउने धन्दा भएको छ । हामीले तिरेको करमा तर मारेर पुस्तौंपुस्ताका लागि जोहो गर्न तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । यही तँछाड–मछाडको परिणति भोग्न अहिले फेरि हामी बाध्य छौं ।
आज फेरि उनीहरू सडकमा आएर हामीलाई भनिरहेछन्, ‘हामीलाई साथ दिनुहोस् ।’ हामीले अब फेरि केका लागि तिनलाई साथ दिने ? केका लागि संघर्ष गर्ने ? विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘बाँदरको हातको नरिवल’ बनाउनेहरूकै कुर्सी जोगाउन हामी नागरिक फेरि सडकमा आउने ? वर्षौंदेखि यिनै धुन्धुकारिहरूले हामीलाई ‘स्वतन्त्र नागरिक’ हुनुको ललिपप देखाएर आफ्नो इसारामा नचाए र अन्तमा आएर हाम्रो भोटको हुर्मत लिए । यिनै ओली, देउवा, दाहाल, नेपाल, खनाल, पौडेल होइनन् वर्षौंदेखि राजनीतिक परिवर्तनका अनेक सपना देखाएर देश र नागरिकको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने ? जुनसुकै शासन, जुनसुकै व्यवस्था आए पनि देखिने अनुहार यिनै होइनन् ? अब पनि यिनीहरूलाई ‘भैगो त नि !’ भन्दै माफ गर्ने कि ‘तिमीहरूको म्याद सकियो, तिमीहरू पाखा लागेर नयाँ पुस्तालाई मार्गप्रशस्त गर’ भन्ने हिम्मत गर्ने ? यसको निर्णय अब आम नेपालीले बडो सावधानीपूर्वक गर्ने बेला भएको छ ।
के यी ‘डेट एक्स्पायर्ड’ नेताहरूलाई पाखा लगाएर देशको राजनीति र शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने हिम्मत ‘नयाँ पुस्ता’ भनिएकाहरूमा छ ? के गगन थापा, विश्वप्रकाशहरू देउवा र पौडेलहरूलाई विस्थापन गर्ने हिम्मत गर्न सक्छन् ? के घनश्याम भुसाल, भीम रावल, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीहरू ओली, नेपाल, खनालहरूलाई विस्थापन गर्न सक्छन् ? के जनार्दन शर्मा, लेखनाथ न्यौपानेहरू दाहालहरूलाई विस्थापन गर्ने हिम्मत गर्न सक्छन् ? यदि सक्छन् भने आऊन् हामी नागरिकमाझ फेरि भोट माग्न । होइन भने हामीलाई ‘भोटर’ मात्र देख्ने, सत्ता नपाउँदा सडकमा निस्केर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने, अरू बेला नागरिकका दुःख, पीडा र समस्याप्रति आँखा चिम्लनेहरूका दुर्दिन हेर्न हामी पनि लालायित छौं ।
आज आफूलाई पर्दा सडकमा आएर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने नेताहरू नागरिकहरूले न्याय माग्दै सडकमा आउँदा कहाँ थियौ ? निर्मलाजस्ता कलिला नानीहरू बलात्कृत भएर मारिँदा तिम्रा आवाज कहाँ भासिएका थिए ? लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक सडकमा आउँदा तिमीहरू कहाँ थियौ ? अहिले मध्यावधिमा जान बुरुकबुरुक गर्दै खुट्टा उचालिरहेका देउवाहरू कहाँ थिए ? कोरोनाले जनजीवन तहसनहस हुँदा तिमीहरू बोलेको किन सुनिएन ? चुनावका बेला मात्र हामीले तिमीहरूको उपस्थितिलाई स्वागत गर्नुपर्ने किन ?
हामी सधैं तिमीहरूको रैती बन्नुपर्ने ? अहँ, अब पटक्कै स्वीकार छैन तिमीहरूको शासन, तिमीहरूको दबदबा ! हामी एक्काइसौं शताब्दीका स्वतन्त्र नागरिक हौं । हामीलाई फेरि पनि तिमीहरू जस्तैलाई भोट हालेर सिंहदरबारमा हालीमुहाली गर्न पठाउने सोख पटक्कै छैन । यदि चुनाव भैहाल्यो भने पनि अबको मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् ‘नो भोट’ को व्यवस्था गरियोस् । हामी यो देशलाई सम्पूर्ण रूपले आफ्नो भन्न चाहन्छौं र यस देशको स्वतन्त्र नागरिक हुन चाहन्छौं ।
प्रकाशित : पुस २४, २०७७ ०८:०२